कोरोना कहरको एकवर्षः कुन जीवन बीमा कम्पनीले कुन महिना कति बिजनेश गरे ? (विस्तृत रिपोर्ट) – Clickmandu
कोरोना कहरको एकवर्षः कुन जीवन बीमा कम्पनीले कुन महिना कति बिजनेश गरे ? (विस्तृत रिपोर्ट)
दिलु कार्की २०७७ चैत १९ गते १२:३९ मा प्रकाशित
काठमाडौं । कोरोना कहरमै पनि जीवन बीमा कम्पनीहरुले उल्लेख्य मात्रामा व्यवसाय बढाएका छन् । कोरोनाको असरका कारण कतिपय व्यवसाय बन्द हुने अवस्थामा पुगे पनि जीवन बीमा व्यवसायमा कोरोनाको असर खासै देखिएन ।
२०७६ फागुन मसान्तबाट नेपालमा शुरु भएको कोरोना भाइरस संक्रमण ०७७ फागुनमा एक वर्ष पूरा भइसकेको छ ।
यस अवधिमा केही कम्पनीहरुले भने आक्रमकरुपमा व्यवसाय बढाएका छन् । जीवन बीमा कम्पनीहरुको व्यवसाय बिस्तार भनेको प्रथम बीमा शुल्क संकलन वृद्धिदरलाई मानिन्छ ।
सञ्चालनमा रहेका १९ जीवन बीमा कम्पनीहरुले ०७६ फागुन मसान्तको तुलनामा ०७७ फागुन मसान्तसम्ममा ३६.६९ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब ५४ करोडले प्रथम बीमा शुल्क संकलन बढाएको बीमा समितिले जनाएको छ । समग्र जीवन बीमा क्षेत्रको कुल प्रथम बीमा शुल्क बढे पनि २ वटाको भने घटेको छ ।
गत वर्षको फागुन मसान्तसम्म २० अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेका थिए । जुन चालु आवको सोही अवधिमा २८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
जीवन बीमा कम्पनीहरुले सावधिक जीवन बीमा, अग्रिम भुक्तानी सावधिक जीवन बीमा, रुपान्तरिक सावधिक जीवन बीमा, सामान्य म्यादी जीवन बीमा, आजीवन जीवन बीमा, विशेष म्यादी जीवन बीमा र अन्य प्रकारका बीमा पोलिसी बिक्री गरिरहेका छन् ।
कुन बीमा कम्पनीले कति बिजनेश गरे ?
एक वर्षको अवधिमा सबैभन्दा राम्रो व्यवसाय बिस्तार गर्ने कम्पनीको पहिलो सूचीमा गुँरास लाइफ, दोस्रोमा सुर्या लाइफ र तेस्रो स्थानमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी छन् । सो अवधिमा सबैभन्दा थोरै प्रथम बीमा शुल्क संकलनको वृद्धिदर एलआइसीको रहेको छ भने मेट लाइफ र राष्ट्रिय बीमा संस्थानको प्रथम बीमा शुल्क संकलन वृद्धिदर घटेको छ ।
गुराँस लाइफः कम्पनीले गत आवको फागुन मसान्तसम्म ३६ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो । जुन चालु आवको सोही अवधिमा २ सय प्रतिशत बढीले वृद्धि गरेर १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
२०७६ फागुन मसान्तसम्ममा कम्पनीले ३७ करोड रुपैयाँ र चैत मसान्तसम्म ३८ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो । कम्पनीले २०७७ बैशाख मसान्तसम्म ३८ करोड, जेठ मसान्तसम्म ४० करोड र असार मसान्तसम्म ७८ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो ।
चालु आवको पहिलो अर्थात् साउन महिनामा कम्पनीले ४ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो । कम्पनीले भदौ मसान्तसम्म १० करोड, असोज मसान्तसम्म २९ करोड र कात्तिक मसान्तसम्म ३४ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको छ ।
त्यसैगरी, कम्पनीले मंसिर मसान्तसम्म ४४ करोड, पुस मसान्तसम्म १ अर्ब २ करोड, माघ मसान्तसम्म १ अर्ब १४ करोड र फागुन मसान्तसम्म १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ गरी एक वर्षको अवधिमा कुल ६ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको छ ।
सुर्या लाइफः कम्पनीले गत आवको फागुन मसान्तसम्म ६३ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो । जुन चालु आवको सोही अवधिमा १ सय ३१.७५ प्रतिशतले वृद्धि भएर १ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
२०७६ फागुन मसान्तसम्ममा कम्पनीले ६३ करोड रुपैयाँ र चैत मसान्तसम्म ६४ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो । कम्पनीले २०७७ बैशाख मसान्तसम्म ६७ करोड, जेठ मसान्तसम्म ७३ करोड र असार मसान्तसम्म १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो ।
कम्पनीले साउन महिनामा ६ करोड, भदौ मसान्तसम्म १३ करोड, असोज मसान्तसम्म २८ करोड र काक्तिक मसान्तसम्म ४४ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको छ ।
साथै, कम्पनीले मंसिर मसान्तसम्म ६१ करोड, पुस मसान्तसम्म १ अर्ब १६ करोड, माघ मसान्तसम्म १ अर्ब ४३ करोड र फागुन मसान्तसम्म १ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ गरी एक वर्षको अवधिमा कुल ९ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको छ ।
रिलायन्स लाइफः कम्पनीले गत आवको फागुन मसान्तसम्म ४९ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो । जुन चालु आवको सोही अवधिमा १ सय १४.२९ प्रतिशतले वृद्धि भएर १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
२०७६ फागुन मसान्तसम्ममा कम्पनीले ४९ करोड रुपैयाँ र चैत मसान्तसम्म ५० करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो । कम्पनीले २०७७ बैशाख मसान्तसम्म ५५ करोड, जेठ मसान्तसम्म ६५ करोड र असार मसान्तसम्म ९१ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो ।
कम्पनीले चालु आवको पहिलो अर्थात् साउन महिनामा ४ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो । कम्पनीले भदौ मसान्तसम्म ९ करोड, असोज मसान्तसम्म २५ करोड र काक्तिक मसान्तसम्म ३२ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको छ ।
साथै, कम्पनीले मंसिर मसान्तसम्म ४० करोड, पुस मसान्तसम्म ६४ करोड, माघ मसान्तसम्म ८८ करोड र फागुन मसान्तसम्म १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ गरी एक वर्षको अवधिमा कुल ६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको छ ।
सानिमा लाइफः कम्पनीले गत आवको फागुन मसान्तसम्म ४० करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो । जुन चालु आवको सोही अवधिमा १ सय २.५० प्रतिशतले वृद्धि भएर ८१ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
२०७६ फागुन मसान्तसम्ममा कम्पनीले ४० करोड रुपैयाँ र चैत मसान्तसम्म ४० करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो । कम्पनीले २०७७ बैशाख मसान्तसम्म ४१ करोड, जेठ मसान्तसम्म ४६ करोड र असार मसान्तसम्म ५५ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो ।
कम्पनीले साउनमा ४ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो । कम्पनीले भदौ मसान्तसम्म ९ करोड, असोज मसान्तसम्म २२ करोड र काक्तिक मसान्तसम्म ३० करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको छ ।
साथै, कम्पनीले मंसिर मसान्तसम्म ४२ करोड, पुस मसान्तसम्म ६४ करोड, माघ मसान्तसम्म ७२ करोड र फागुन मसान्तसम्म ८१ करोड रुपैयाँ गरी एक वर्षको अवधिमा कुल ५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको छ ।
प्रभु लाइफः कम्पनीले गत आवको फागुन मसान्तसम्म ३४ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो । जुन चालु आवको सोही अवधिमा ८२.३५ प्रतिशतले वृद्धि भएर ६२ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
२०७६ फागुन मसान्तसम्ममा कम्पनीले ३४ करोड रुपैयाँ र चैत मसान्तसम्म ३५ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो । कम्पनीले २०७७ बैशाख मसान्तसम्म ३६ करोड, जेठ मसान्तसम्म ३८ करोड र असार मसान्तसम्म ८९ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो ।
कम्पनीले साउनमा ३ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो । कम्पनीले भदौ मसान्तसम्म ९ करोड, असोज मसान्तसम्म १३ करोड र काक्तिक मसान्तसम्म १८ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको छ ।
साथै, कम्पनीले मंसिर मसान्तसम्म २५ करोड, पुस मसान्तसम्म ३९ करोड, माघ मसान्तसम्म ५२ करोड र फागुन मसान्तसम्म ६२ करोड रुपैयाँ गरी एक वर्षको अवधिमा कुल ४ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको छ ।
रिलायवल लाइफः कम्पनीले गत आवको फागुन मसान्तसम्म ८० करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो । जुन चालु आवको सोही अवधिमा ७८.७५ प्रतिशतले वृद्धि भएर १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
२०७६ फागुन मसान्तसम्ममा कम्पनीले ८० करोड रुपैयाँ र चैत मसान्तसम्म ८३ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो । कम्पनीले २०७७ बैशाख मसान्तसम्म ८७ करोड, जेठ मसान्तसम्म ९१ करोड र असार मसान्तसम्म १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो ।
चालु आवको पहिलो अर्थात् साउन महिना कम्पनीले ९ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो । कम्पनीले भदौ मसान्तसम्म २१ करोड, असोज मसान्तसम्म ३७ करोड र काक्तिक मसान्तसम्म ५१ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको छ ।
साथै, कम्पनीले मंसिर मसान्तसम्म ६९ करोड, पुस मसान्तसम्म ९६ करोड, माघ मसान्तसम्म १ अर्ब २० करोड र फागुन मसान्तसम्म १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ गरी एक वर्षको अवधिमा कुल ९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको छ ।
नेशनल लाइफः कम्पनीले गत आवको फागुन मसान्तसम्म १ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो । जुन चालु आवको सोही अवधिमा ७१.७१ प्रतिशतले वृद्धि भएर २ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
२०७६ फागुन मसान्तसम्ममा कम्पनीले १ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ र चैत मसान्तसम्म १ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो । कम्पनीले २०७७ बैशाख मसान्तसम्म १ अर्ब ६० करोड, जेठ मसान्तसम्म १ अर्ब ६७ करोड र असार मसान्तसम्म २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो ।
चालु आवको पहिलो महिना साउनमा कम्पनीले २० करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो । कम्पनीले भदौ मसान्तसम्म ४४ करोड, असोज मसान्तसम्म ८२ करोड र काक्तिक मसान्तसम्म १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको छ ।
साथै, कम्पनीले मंसिर मसान्तसम्म १ अर्ब ४२ करोड, पुस मसान्तसम्म १ अर्ब ८५ करोड, माघ मसान्तसम्म २ अर्ब २६ करोड र फागुन मसान्तसम्म २ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ गरी एक वर्षको अवधिमा कुल १९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको छ ।
ज्योति लाइफः कम्पनीले गत आवको फागुन मसान्तसम्म ७१ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो । जुन चालु आवको सोही अवधिमा ७०.४२ प्रतिशतले वृद्धि भएर १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
२०७६ फागुन मसान्तसम्ममा कम्पनीले ७१ करोड रुपैयाँ र चैत मसान्तसम्म ७३ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो । कम्पनीले २०७७ बैशाख मसान्तसम्म ७७ करोड, जेठ मसान्तसम्म ८८ करोड र असार मसान्तसम्म १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो ।
कम्पनीले साउनमा ८ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो । कम्पनीले भदौ मसान्तसम्म २० करोड, असोज मसान्तसम्म ३१ करोड र काक्तिक मसान्तसम्म ३८ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको छ ।
साथै, कम्पनीले मंसिर मसान्तसम्म ५४ करोड, पुस मसान्तसम्म ८९ करोड, माघ मसान्तसम्म १ अर्ब ८ करोड र फागुन मसान्तसम्म १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ गरी एक वर्षको अवधिमा कुल ९ अर्ब १ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको छ ।
आइएमई लाइफः कम्पनीले गत आवको फागुन मसान्तसम्म ५१ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो । जुन चालु आवको सोही अवधिमा ६२.७५ प्रतिशतले वृद्धि भएर ८३ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
२०७६ फागुन मसान्तसम्ममा कम्पनीले ५१ करोड रुपैयाँ र चैत मसान्तसम्म ५३ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो । कम्पनीले २०७७ बैशाख मसान्तसम्म ५४ करोड, जेठ मसान्तसम्म ५७ करोड र असार मसान्तसम्म ७८ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो ।
चालु आवको पहिलो अर्थात् महिना साउनमा कम्पनीले ९ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो । कम्पनीले भदौ मसान्तसम्म १७ करोड, असोज मसान्तसम्म २९ करोड र कात्तिक मसान्तसम्म ३५ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको छ ।
साथै, कम्पनीले मंसिर मसान्तसम्म ४४ करोड, पुस मसान्तसम्म ६५ करोड, माघ मसान्तसम्म ७४ करोड र फागुन मसान्तसम्म ८३ करोड रुपैयाँ गरी एक वर्षको अवधिमा कुल ६ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको छ ।
सिटिजन्स लाइफः कम्पनीले गत आवको फागुन मसान्तसम्म ७१ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो । जुन चालु आवको सोही अवधिमा ५६.३४ प्रतिशतले वृद्धि भएर १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
२०७६ फागुन मसान्तसम्ममा कम्पनीले ७१ करोड रुपैयाँ र चैत मसान्तसम्म ७३ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो । कम्पनीले २०७७ बैशाख मसान्तसम्म ७५ करोड, जेठ मसान्तसम्म ८० करोड र असार मसान्तसम्म १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो ।
चालु आवको पहिलो अर्थात् साउन महिनामा कम्पनीले ९ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो । कम्पनीले भदौ मसान्तसम्म १७ करोड, असोज मसान्तसम्म ३१ करोड र कात्तिक मसान्तसम्म ४२ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको छ ।
साथै, कम्पनीले मंसिर मसान्तसम्म ५३ करोड, पुस मसान्तसम्म ७३ करोड, माघ मसान्तसम्म ८९ करोड र फागुन मसान्तसम्म १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ गरी एक वर्षको अवधिमा कुल ८ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको छ ।
प्राइम लाइफः कम्पनीले गत आवको फागुन मसान्तसम्म ६४ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो । जुन चालु आवको सोही अवधिमा ४८.४४ प्रतिशतले वृद्धि भएर ९५ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
२०७६ फागुन मसान्तसम्ममा कम्पनीले ६४ करोड रुपैयाँ र चैत मसान्तसम्म ६८ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो । कम्पनीले २०७७ बैशाख मसान्तसम्म ७० करोड, जेठ मसान्तसम्म ७७ करोड र असार मसान्तसम्म १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो ।
चालु आवको पहिलो महिना साउनमा कम्पनीले ८ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो । कम्पनीले भदौ मसान्तसम्म १६ करोड, असोज मसान्तसम्म ३७ करोड र कात्तिक मसान्तसम्म ४७ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको छ ।
साथै, कम्पनीले मंसिर मसान्तसम्म ५७ करोड, पुस मसान्तसम्म ७१ करोड, माघ मसान्तसम्म १ अर्ब १० करोड र फागुन मसान्तसम्म ९५ करोड रुपैयाँ गरी एक वर्षको अवधिमा कुल ८ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको छ ।
एशियन लाइफः कम्पनीले गत आवको फागुन मसान्तसम्म १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो । जुन चालु आवको सोही अवधिमा ३४.५८ प्रतिशतले वृद्धि भएर १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
२०७६ फागुन मसान्तसम्ममा कम्पनीले १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ र चैत मसान्तसम्म १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो । कम्पनीले २०७७ बैशाख मसान्तसम्म १ अर्ब १० करोड, जेठ मसान्तसम्म १ अर्ब २८ करोड र असार मसान्तसम्म १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो ।
चालु आवको पहिलो महिना कम्पनीले ९ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो । कम्पनीले भदौ मसान्तसम्म २८ करोड, असोज मसान्तसम्म ४९ करोड र कात्तिक मसान्तसम्म ५८ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको छ ।
साथै, कम्पनीले मंसिर मसान्तसम्म ७४ करोड, पुस मसान्तसम्म १ अर्ब १७ करोड, माघ मसान्तसम्म १ अर्ब ३३ करोड र फागुन मसान्तसम्म १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ गरी एकवर्षको अवधिमा कुल १२ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको छ ।
महालक्ष्मी लाइफः कम्पनीले गत आवको फागुन मसान्तसम्म ३६ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो । जुन चालु आवको सोही अवधिमा ३०.५६ प्रतिशतले वृद्धि भएर ४७ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
२०७६ फागुन मसान्तसम्ममा कम्पनीले ३६ करोड रुपैयाँ र चैत मसान्तसम्म ३८ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो । कम्पनीले २०७७ बैशाख मसान्तसम्म ४० करोड, जेठ मसान्तसम्म ४३ करोड र असार मसान्तसम्म ८० करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो ।
चालु आवको पहिलो महिना साउनमा कम्पनीले २ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो । कम्पनीले भदौ मसान्तसम्म ७ करोड, असोज मसान्तसम्म १३ करोड र कात्तिक मसान्तसम्म १६ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको छ ।
साथै, कम्पनीले मंसिर मसान्तसम्म २५ करोड, पुस मसान्तसम्म ३४ करोड, माघ मसान्तसम्म ३९ करोड र फागुन मसान्तसम्म ४७ करोड रुपैयाँ गरी एक वर्षको अवधिमा कुल ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको छ ।
सन लाइफः कम्पनीले गत आवको फागुन मसान्तसम्म ४६ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो । जुन चालु आवको सोही अवधिमा ३०.४३ प्रतिशतले वृद्धि भएर ६० करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
२०७६ फागुन मसान्तसम्ममा कम्पनीले ४६ करोड रुपैयाँ र चैत मसान्तसम्म ४७ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो । कम्पनीले २०७७ बैशाख मसान्तसम्म ४७ करोड, जेठ मसान्तसम्म ४८ करोड र असार मसान्तसम्म ५७ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो ।
चालु आवको पहिलो महिना साउनमा कम्पनीले ४ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो । कम्पनीले भदौ मसान्तसम्म १० करोड, असोज मसान्तसम्म २३ करोड र कात्तिक मसान्तसम्म २८ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको छ ।
साथै, कम्पनीले मंसिर मसान्तसम्म ३४ करोड, पुस मसान्तसम्म ४७ करोड, माघ मसान्तसम्म ५५ करोड र फागुन मसान्तसम्म ६० करोड रुपैयाँ गरी एक वर्षको अवधिमा कुल ५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको छ ।
युनियन लाइफः कम्पनीले गत आवको फागुन मसान्तसम्म १ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो । जुन चालु आवको सोही अवधिमा २६.३४ प्रतिशतले वृद्धि भएर २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
२०७६ फागुन मसान्तसम्ममा कम्पनीले १ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ र चैत मसान्तसम्म १ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो । कम्पनीले २०७७ बैशाख मसान्तसम्म १ अर्ब ९९ करोड, जेठ मसान्तसम्म २ अर्ब ११ करोड र असार मसान्तसम्म २ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो ।
चालु आवको पहिलो महिना साउनमा कम्पनीले २२ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो । कम्पनीले भदौ मसान्तसम्म ४७ करोड, असोज मसान्तसम्म ८२ करोड र काक्तिक मसान्तसम्म १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको छ ।
साथै, कम्पनीले मंसिर मसान्तसम्म १ अर्ब २६ करोड, पुस मसान्तसम्म १ अर्ब ७६ करोड, माघ मसान्तसम्म १ अर्ब ९९ करोड र फागुन मसान्तसम्म २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ गरी एक वर्षको अवधिमा कुल २० अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको छ ।
नेपाल लाइफः कम्पनीले गत आवको फागुन मसान्तसम्म ५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो । जुन चालु आवको सोही अवधिमा १३.४३ प्रतिशतले वृद्धि भएर ६ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
२०७६ फागुन मसान्तसम्ममा कम्पनीले ५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ र चैत मसान्तसम्म ५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो । कम्पनीले २०७७ बैशाख मसान्तसम्म ५ अर्ब ६४ करोड, जेठ मसान्तसम्म ६ अर्ब ८ करोड र असार मसान्तसम्म १० अर्ब १६ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो ।
चालु आवको पहिलो महिना साउनमा कम्पनीले ८० करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो । कम्पनीले भदौ मसान्तसम्म १ अर्ब ३८ करोड, असोज मसान्तसम्म २ अर्ब ५ करोड र कात्तिक मसान्तसम्म २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको छ ।
साथै, कम्पनीले मंसिर मसान्तसम्म ३ अर्ब ६२ करोड, पुस मसान्तसम्म ४ अर्ब ६७ करोड, माघ मसान्तसम्म ५ अर्ब ५४ करोड र फागुन मसान्तसम्म ६ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ गरी एक वर्षको अवधिमा कुल ५९ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको छ ।
एलआइसीः कम्पनीले गत आवको फागुन मसान्तसम्म २ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो । जुन चालु आवको सोही अवधिमा ४.५२ प्रतिशतले वृद्धि भएर २ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
२०७६ फागुन मसान्तसम्ममा कम्पनीले २ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ र चैत मसान्तसम्म २ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो । कम्पनीले २०७७ बैशाख मसान्तसम्म २ अर्ब ३१ करोड, जेठ मसान्तसम्म २ अर्ब ३३ करोड र असार मसान्तसम्म ४ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो ।
चालु आवको पहिलो महिना साउनमा कम्पनीले ८ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो । कम्पनीले भदौ मसान्तसम्म ३८ करोड, असोज मसान्तसम्म १ अर्ब ३ करोड र कात्तिक मसान्तसम्म १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको छ ।
साथै, कम्पनीले मंसिर मसान्तसम्म १ अर्ब ४६ करोड, पुस मसान्तसम्म २ अर्ब ५ करोड, माघ मसान्तसम्म २ अर्ब २९ करोड र फागुन मसान्तसम्म २ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ गरी एक वर्षको अवधिमा कुल २४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको छ ।
मेट लाइफः कम्पनीले गत आवको फागुन मसान्तसम्म १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो । जुन चालु आवको सोही अवधिमा २०.९७ प्रतिशतले घटेर ९८ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।
२०७६ फागुन मसान्तसम्ममा कम्पनीले १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ र चैत मसान्तसम्म १ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो । कम्पनीले २०७७ बैशाख मसान्तसम्म १ अर्ब २१ करोड, जेठ मसान्तसम्म १ अर्ब २३ करोड र असार मसान्तसम्म १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो ।
चालु आवको पहिलो महिना साउनमा कम्पनीले ९ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो । कम्पनीले भदौ मसान्तसम्म १६ करोड, असोज मसान्तसम्म २९ करोड र कात्तिक मसान्तसम्म ४० करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको छ ।
साथै, कम्पनीले मंसिर मसान्तसम्म ५१ करोड, पुस मसान्तसम्म ६६ करोड, माघ मसान्तसम्म ८१ करोड र फागुन मसान्तसम्म ९८ करोड रुपैयाँ गरी एक वर्षको अवधिमा कुल १० अर्ब ६ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको छ ।
राष्ट्रिय बीमा संस्थानः कम्पनीले गत आवको फागुन मसान्तसम्म ८८ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो । जुन चालु आवको सोही अवधिमा ३४.०९ प्रतिशतले घटेर ५८ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।
२०७६ फागुन मसान्तसम्ममा कम्पनीले ८८ करोड रुपैयाँ र चैत मसान्तसम्म ९४ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो । कम्पनीले २०७७ बैशाख मसान्तसम्म ८१ करोड, जेठ मसान्तसम्म ८२ करोड र असार मसान्तसम्म ९२ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो ।
चालु आवको पहिलो महिना कम्पनीले ४ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो । कम्पनीले भदौ मसान्तसम्म ३१ करोड, असोज मसान्तसम्म ३६ करोड र कात्तिक मसान्तसम्म ४१ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको छ ।
साथै, कम्पनीले मंसिर मसान्तसम्म ४४ करोड, पुस मसान्तसम्म ४९ करोड, माघ मसान्तसम्म ५४ करोड र फागुन मसान्तसम्म ५८ करोड रुपैयाँ गरी एक वर्षको अवधिमा कुल ७ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको छ ।